Kharashka Xisaabaadka Bangiga Bankiga Dhexe ee Furan Koonto Cusub
Kharashka Xisaabaadka Bangiga Dhexe
Dadku intooda badan way dhistaan xisaabaadka bangiga dibadda ee ilaalinta hantida ee dacwooyinka iyo qarsoodi dhaqaale. Ma iibsan kartid mashiinno waayo waxaad rabto mato. Waxaad iibsaneysaa mid ka mid ah sababtoo ah waxaad dooneysaa god. Sidaa darteed, uma baahnin oo kaliya in aan weydiisano, "Waa maxay kharashka lagu dhisayo loona sii wado koontada xeebta?" Sidoo kale waxaan u baahanahay in aan waydiisanno, "Waa maxay kharashka, ilaalinta hantida iyo maaliyadda gaarka ah?"
Marka, ilaalinta hantida iyo asturnaanta maaliyadeed, qaanuunka koowaad ma aha in lagu furo akoon magacaaga. Ku furi magaca shirkad dibadeed, LLC ama aaminaad. Ka soo qaad in magacaagu yahay Pat Smith. Waxaad ka soo dirtaa lacag ka soo xareysaa barta hoose ilaa wadada una gudubta koonto ay ku taal “Pat Smith.” Xawaaladda wareejinta xawaaladda waxay ka dhigeysaa rikoor aad u dheer in aad leedahay koonto meel ka baxsan. Taasi waa sababta aan guud ahaan u furno akoonnada bangiyo ku yaal magaca shirkadaha ama shirkadaha lagu aaminay.
Tani waxay kordhineysaa asturnaanta, sababtoo ah xargaggu wuxuu ku wareejinayaa gudaha iyo dibediisa iyo sidoo kale kuwa kale bangiga badda Macaamillada waxaa lagu sameeyaa magaca shirkadda, maahan shaqsiga. Ujrada dejinta ee lagu furayo koonto bangi meel ka baxsan ayaa badanaa u dhexeysa $ 550 illaa $ 1,250. Tani waxay kuxirantahay bangiga iyo xukunka. Shirkad dibedda ka shaqeysa ayaa caadiyan u dhexeysa $ 1,685 iyo $ 2,495. Marka, wadarta guud ahaan waa $ 2,235 illaa $ 3,745 labadaba.
Meeqa Bankiyada Dhulka Lahaa?
Sida laga soo xigtay Quora, waxaa jira qiyaasaha 14,600 ee adduunka sida qoraalkan. Si kastaba ha noqotee, bangiyada aadka u yar ayaa furi doona xisaabaadka ajnabiga, gaar ahaan kuwa ka socda US, UK, Canada ama Australia. Waxaa intaa dheer, waxaa jira tiro balaadhan oo adeegyo ah oo ka soo jeeda qallafsanaanta iyo qancinta si aan wanaagsaneyn. Lacagtaada ma ammaan tahay? Ma ku kalsoon tahay bankiga? Ka fakar. Tani waa lacagtaada. Waxaad rabtaa khibrad bangiyeed oo ammaan ah oo haboon oo ku haboon khadadka bilowga.
Waxa jira tiro badan oo nabadgelyo-xumo leh, bangiyada bixiya adeegyo aad u wanaagsan. Laakiin waxaa jira bangiyo aad u badan oo bannaanka yaalla oo raadinaya midka saxda ah iyagoo ku dhex boodaya internetka. Sida ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo waa in la waydiiyo qof hore u jiray; gaar ahaan qof aasaasay akoon dibadeed oo kumanaan dad ah. Marka, shaqaalee khabiir. Waxay u qalmi doontaa maalgashiga yar si loo helo sax markii ugu horeysay. Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah waxaa ku yaal lambar taleefan iyo foomka wadatashiga shaashadan. Gaadhsii oo ka faa'iidayso.
Bangiga debeddu waxay ubaahantahay codsi, dadaal dheelitiran iyo lacag dhigasho bilow ah si loogu adeego koontadaada. Codsiga badanaa waa mid toos ah. Waxay leedahay magacaaga, cinwaankaaga iyo lambarkaaga taleefanka. Caadi ahaan waxaad bixin doontaa qiyaasta xasaasiga ah ee inta aad ku talo jirto inaad dhigato ama kala baxdo iyo macluumaad kale.
Hubsiimo, waxaad rabtaa asturnaanta. Laakiin ma rabtid asturnaan aad u badan oo qof iska dhigaya inaad bananka gali karto oo aad kala bixi karto lacagtaada. Marka, dadaalka saxda ah, sida koobiga nootaaban ee baasaboorkaaga, biil adeegsi asal ah iyo waraaqo tixraac ayaa loo baahan yahay. Waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in haddii qof soo wacayo, emayl u soo diro ama uu bananka dhex galo si uu u weydiisto lacagta ay dhab ahaantii adiga tahay. Macluumaadkaaga wuxuu noqon doonaa mid sir ah. Laakiin waxaad dooneysaa in lacagta ay kuu socoto, ma ahan qof oranaya adigu adigaa ah. Taasi waa sababta ugu weyn ee ay ugu codsadaan dukumentiyada aqoonsiga.
Waa cunsur dhaqaale marka qofku dalkiisa u maleeyo bangiyadooda inay yihiin aamin iyo amaan. Tani waa mabda'a guud. Marka, bulshada caalamku waxay isu tagtaa sanad walba Basel, Switzerland si ay ula yimaadaan heerarka bangiyada caalamiga ah. Immisa deyn ah ayey tahay inuu bangigu awoodo inuu adeegsado marka la barbar dhigo hantida bangiga? Immisa lacag ah ayaa gacanta lagu hayaa? Tallaabooyin noocee ah ayay u baahan yihiin inay qaadaan si ay uga celiyaan ka baxsashada dambiyada iyo maalgalinta argagixisada nidaamka?
Mid ka mid ah awoodaha ugu caansan ee bangiyada xeebaha waa jasiiradaha Cayman. Halkan waxaad ka akhriyi kartaa wax ku saabsan an Shirkadda Cayman iyo koonto.
Marka, sabab kale oo ay bangiyadu ugu baahan yihiin dadaalka saxda ah ayaa ah inay doonayaan inay soo dhoweeyaan “ragga wanaagsan” isla markaana ay sii wadaan "ragga xun." Laakiin sidoo kale waxaad dooneysaa in lacagtaadu noqoto mid aamin ah oo la heli karo. Sidaa daraadeed, uma baahnid in kormeerayaasha caalamiga ahi xidhaan bangiga oo ay xareeyaan lacagtaada. Taasi waa waxa dhici lahaa haddii aad bangiga la wadaagi lahayd dib-u-dhalashada Osama Bin Laden. Bangiyadu ma weydiinayaan oo keliya inay aqoonsadaan dukumentiyada maxaa yeelay waa indho la’aan. Waxay rabaan in adiga iyo kuwa kale ee keydiyaha ah aad nabad qabtaan. Intaa waxaa dheer, iyagu ma doonayaan in ay lumiyaan liisanadooda baananka iyagoo si taxaddar leh u aqbalaya ragga xun nidaamka.
Maxay Sababtu u Dhici Karaan?
Sameynta dhammaan dadaaladan habboon ee heerarka caalamiga ahi u baahan yihiin xor ma aha. Waa lacag. Marka, taasi waa sababta furitaanka akoon dibadeed loogala wareegayo khidmad dejin ah. Bangigu halis uma gelinayo inuu liisto liisankiisa oo uu ka boodo habraaca dadaalka habboon iyo xeerarka-macaamiisha-KYC). Waxaad dhihi kartaa waxaad tahay nin wanaagsan ama gal wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, baanka ayaan ku ogeyn. Marka, waxay kaaga baahan doonaan inaad caddeyso.
Bangigu kuma xadgudbi doono qawaaniinta sababtoo ah waxaad ugu yeeraysaa olol dab ah oo afkaaga ka baxa. Iyaga kama saari doonaan sababta oo ah waxaad u booddaa oo aad u boodaysaa sidii daanyeer oo buuq badan sababtoo ah waxay qaadanayaan waqti aad u dheer ama waxay weydiinayaan macluumaad aad u badan. Maamulayaasha maxalliga ah waxay si joogto ah u baaraan bangiga. Waxay u baahan yihiin inay hubiyaan in bangiyadu ay hubiyeen dhammaan sanduuqyada xisaab kasta. Marka, ha filanin in Rabbigu ku siiyo wicitaan iyo qaylo. Taasi waa, madaxa kuma saari doonaan sababtoo ah waxaad tahay caajis badan si aad u hesho baasaboor ama warqad tixraac bangiga. Khatar uguma ahan inay lumiyaan liisankooda ruqsaddooda. Waxay doorbidi lahaayeen inay u gudbaan macaamiisha kale ee la socota barnaamijka.
Khidmadaha Bangiga Dhulka
Khidmadaha dayactirka billaha ah waxay ka socon karaan $ 20 illaa $ 100, ama sidaas. Khidmadaha wareejinta Wire ayaa sida caadiga ah laga soo bilaabo $ 25 illaa $ 75. Hadaad rabto koonto halka aad ku maalgashan karto suuqa saamiyada waxaa jira hay'ado aad iskaa ku ganacsan kartaan. Waxa kale oo jira hay'ado aad ka heli karto maareeye lacag khibrad leh si ay maalgashi adiga kuugu sameeyaan, oggolaanshahaaga. Maareeyayaasha lacagta badanaa waxay ku dallacaan boqolkiiba aad u yar lacagta ay maareeyaan. Caadi ahaan, noocyada ajuurada iyo inta lacagta laga qaado waxay ku kala duwan yihiin hay'ad. Waxaa laga yaabaa inay ku jiraan gudaha ama banaanka safafka halkan lagu xusay.
Qiimaha dulsaarka ee lagu shubo dhigaalka, khidmadaha bil kasta iyo noocyada akoonnada ayaa kala duwan. Inta badan hay'adaha maaliyadda ee dibedda ayaa leh qiimeyaal tartan si ay u soo jiitaan kuwa wax iibsada. Heerarka dulsaarka ee lagu bixiyo xeebaha ayaa u muuqda inay ka sarreeyaan hay'adaha maxalliga ah. Hawsha lagu dhisayo akaaagaaga bangi ee dibedda waxaa ku jiri doona khidmadaha dejinta, khidmadaha dirista iyo kharashyo yar yar oo kala-duwan. Waxyaabahaas waxaa ka mid noqon kara waxyaabo ay ka mid yihiin kharashaadka nootaayada, iwm. OffshoreCompany.com waxay ka caawisay kumanaan kun oo qof inay furaan akoonno ganacsi oo gaar loo leeyahay, shirkado iyo aaminaad. Marka, na soo gaadha annagana waan ka caawin karnaa baahiyahaas maanta.
Soo ogow xukunka iyo bangiga kugu habboon adiga. Si fudud u isticmaal lambarka ama foomka weydiimaha ee kor ku yaal oo sharax baahiyahaaga.
<Illaa cutubka 9
Ilaa cutubka 11>